Funda izizathu ezibalulekileyo ezenza ukuba uYesu afe
Kutheni uYesu kwafuneka afe? Umbuzo obalulekileyo ngokubalulekayo uquka umbandela ophakathi kobuKristu, kodwa ukuphendula ngokufanelekileyo kudla nzima kumaKristu. Siza kujonga kakuhle umbuzo kwaye sibeke iimpendulo ezinikezelwa kwiZibhalo.
Kodwa ngaphambi kokuba siyenze, kubalulekile ukuqonda ukuba uYesu wayeyiqonda ngokucacileyo umsebenzi wakhe emhlabeni - ukuba wawubandakanya ukubeka ubomi bakhe njengombingelelo.
Ngamanye amazwi, uYesu wayesazi ukuba kuyintando kaYise ukuba afe.
UKristu wabonakalisa ukuqonda kwakhe nokuqonda kokufa kwakhe kule mihlathi ebalulekileyo:
Wandula ke uYesu waqala ukubaxelela ukuba, uNyana woMntu, uya kubandezeleka ngezinto ezininzi kwaye ahlaselwe yienkokeli, ababingeleli abaziintloko, kunye nabafundisi benkolo. Wayeza kubulawa, kwaye iintsuku ezintathu kamva wayeya kuvuka. (NLT) (Kanjalo, Marko 9:31)
Marko 10: 32-34
Ukuthabatha abafundi abalishumi elinesibini, uYesu waqala ukuchaza yonke into eyayikwenzeka kuye eYerusalem. Wathi kubo: "Xa sifika eYerusalem, uNyana woMntu uya kunikelwa kubabingeleli abakhulu kunye nabafundisi bezomthetho, baya kumgwebela ukuba afe, bamnikele kumaRoma. bamkhafulele, bambethe ngeentonga, bambulale, kodwa emva kweentsuku ezintathu uya kuvuka. " (NLT)
Kodwa uYesu waphendula wathi: "Awuyazi into oyicelayo! Ngaba unako ukusela isitya sokudabuka ndiza kusela? Ngaba unako ukubhaptizwa ngobhaptizo lokubandezeleka ndimele ndibhaptizwe?" (NLT)
Nabani ofuna ukuba yinkokeli phakathi kwenu makabe ngumkhonzi wenu, kwaye nabani na ofuna ukuba ngowokuqala mababe yinceku yabo bonke. Kuba mna, uNyana woMntu, weza apha kungekhona ukukhonzwa kodwa ukukhonza abanye, nokunikela ubomi bam njengentlawulelo yabaninzi. " (NLT)
Marko 14: 22-25
Njengoko besidla, uYesu wathabatha isonka sesonka waza wacela intsikelelo kaThixo kuyo. Wabaphulaphula, wanika abafundi, wathi, Yithathe, ngokuba lo ngumzimba wam. Wathabatha indebe yewayini waza wabulela uThixo ngenxa yalo. Wabanika yona, kwaye bonke baphuza kuyo. Wathi kubo: "Leli ligazi lam, lidliwayo ngenxa yabaninzi, liwusisine umnqophiso phakathi koThixo nabantu bakhe. Ndiyaxela ukuba andiyi kusela iwayini, de kube loo mini, xa ndiyisela into entsha ebukumkanini bukaThixo. "U (NLT)
Yohane 10: 17-18
Ngako oko uBawo uyandithanda, kuba ndibeka phantsi umphefumlo wam ukuze ndiwuthathe kwakhona. + Akukho namnye uwathabatha kum, kodwa ndiwubeka phantsi. + Ndinamandla okuwubeka phantsi, ndinamandla okuwuthabatha kwakhona. Lo myalelo ndiwamkele kuBawo wam. " (NKJV)
Ngaba Kubalulekile Ukuba Wabulala UYesu?
Le ndinyana yokugqibela ichaza ukuba kutheni kungenanto yokugxeka amaYuda okanye amaRoma-okanye omnye umntu ngokubulala uYesu. UYesu, enegunya "lokulibeka phantsi" okanye "ukuyithatha kwakhona," ngokukhululeka wanikela ubomi bakhe. Akunandaba ukuba ngubani owambulala uYesu . Abo babethelela izipikili bancedisa ukufeza i-destiny weza ukuzalisekisa ubomi bakhe esiphambanweni.
Amaphuzu alandelayo avela kwiZibhalo aya kukuhamba ngokuphendula umbuzo othi: Kutheni ukuze uYesu afe?
Kutheni uYesu Wayefanele Afe
Nangona uThixo unenceba, bonke abanamandla kunye nabo bonke abaxolelayo, uThixo ungcwele, ulungile kwaye ulungile.
Kodwa uYehova uSomandla uphakanyiswa ngobulungisa bakhe. Ubungcwele bukaThixo buboniswa ngobulungisa bakhe. (NLT)
Isono nobungcwele asihambisani
Isono sangena kwihlabathi ngokungathobeli komntu omnye ( uAdam) , kwaye ngoku ke bonke abantu bazalwa "benesono."
Xa uAdam wonile, isono sangena kulo lonke uluntu. Isono sika-Adam sazisa ukufa, ngoko ukufa kwasasazeka kuwo wonke umntu, kuba wonke umntu wenza isono. (NLT)
Ngokuba bonke bonile; konke kukusilela kumgangatho ozukileyo kaThixo. (NLT)
Isono sisahlukanisa noThixo
Isono sethu sasihlula ngokupheleleyo ubungcwele bukaThixo.
Isaya 35: 8
Kuya kuba khona umendo omkhulu; kuya kuthiwa yiNdlela yoBungcwele . Into engcolileyo ayiyi kuhamba kuyo; Kuya kuba ngabo bahamba ngaleyo Ndlela; Iimfama ziza kuhamba kuyo. (NIV)
Ke ubugwenxa bakho buhlukanisile noThixo wakho; izono zakho zifihle ubuso bakhe kuwe, ukuze angava. (NIV)
Isono soSono Sukufa okuPhakade
Ubungcwele bukaThixo kunye nobulungisa bufuna ukuba isono nesiphambano sihlawulwe ngenxa yokuhlwaywa.
Isihlwayo esisodwa okanye intlawulo yesono kukufa ngonaphakade.
Kuba umvuzo wesono kukufa, kodwa isipho samahhala sikaThixo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu. (NASB)
Ngoko nje ngokuba isono sasilawula bonke abantu kwaye sababuyisa ekufeni, ngoku ububele bukaThixo bubuseleyo esikhundleni salo, kusinika ukuma okulungileyo kuThixo kwaye kubangela ubomi obungunaphakade ngoYesu Kristu iNkosi yethu. (NLT)
Ukufa Kwethu Akukwaneli Ukubonelela NgeSono
Ukufa kwethu akwanele ukuhlawulela isono kuba ukucamagushela kufuna umnikelo opheleleyo, ongenasiphala, owenzelwe ngendlela efanelekileyo. UYesu, umntu onguThixo ogqibeleleyo, weza ukunikela ngesibingelelo esicocekileyo, esipheleleyo nesigxina ukususa, ukubonela, nokwenza intlawulo engapheliyo yesono sethu.
1 Petros 1: 18-19
Kuba uyazi ukuba uThixo uhlawulele intlawulelo ukukusindisa ebomini obungenanto oyizuze kwiihlo. Yaye intlawulelo awayeyihlawula yayingeyona igolide okanye isilivere nje. Wakuhlawulela ngegazi elixabisekileyo likaKristu, ongenasono, iMvana ongenasiphelo kaThixo. (NLT)
Hebhere 2: 14-17
Ekubeni abantwana benenyama kunye negazi, naye wabelana ngobuntu babo ukuze ngokubhubha kwakhe amtshabalalise lowo obambe amandla okufa-okungukuthi, uMtyholi, kwaye akhulule abo bonke ubomi babo babanjwe ebukhosini ngenxa yokoyika lokufa. Kuba ngokuqinisekileyo akusiziingelosi unceda, kodwa inzala kaAbraham . Ngenxa yalesi sizathu kwafuneka enze njengabazalwana bakhe ngeendlela zonke, ukuze abe ngumbingeleli omkhulu onenceba nothembekileyo ekukhonzeni uThixo, aze ahlawulele izono zabantu. (NIV)
NguYesu kuphela onguMvana Ogqibeleleyo kaThixo
Kuphela ngoYesu Kristu sinokuxolelwa izono zethu, ngoko kubuyiselwa ubuhlobo bethu noThixo nokususa ukwahlukana okubangelwa yisono.
2 kwabaseKorinte 5:21
UThixo wamenza lowo ongenasono ukuba abe sisono ngenxa yethu, ukuze kuthi ngaye sibe ngobulungisa bukaThixo. (NIV)
1 Korinte 1:30
Kungenxa yokuba ukhona kuKristu Yesu, oye waba ubulumko obuvela kuThixo-oko kukuthi, ubulungisa bethu, ubungcwele nokuhlengwa . (NIV)
UYesu unguMesiya, uMsindisi
Ukubandezeleka nozuko lukaMesiya ozayo kwakuxelwe kuIsaya isahluko 52 no-53. Abantu bakaThixo eTestamente Endala babelindele phambili kuMesiya owayeya kubahlangula kwisono sabo. Nangona engazange eze kwifomu abayilindele, kwakukho ukholo lwabo olulindele phambili ekusindisweni kwakhe okwabasindisa. Ukholo lwethu, olujonge ngasemva kwisenzo sakhe sosindiso, lusisindisa. Xa simkela intlawulo kaYesu ngenxa yesono sethu, idini lakhe eligqibeleleyo lihlutha isono sethu kwaye lubuyisele ukuma kwethu okulungileyo kuThixo. Inceba kaThixo nobabalo zinika indlela yokusindiswa.
Kuba sukuba sabuyiselwa kubuhlobo bukaThixo ngokufa koNyana wakhe ngelixa sisezintshaba zakhe, ngokuqinisekileyo siya kuhlangulwa kwisigwebo esingunaphakade ngobomi bakhe. (NLT)
Xa sise "kuYesu Krestu" sihlanganiswe ngegazi lakhe ngokufa kwakhe komnikelo, izono zethu zihlawulwa, kwaye asiyikufa ukufa ngonaphakade . Sifumana ubomi obungunaphakade ngoYesu Kristu. Yingakho uYesu kwafuneka afe.
Ngaba Ndifanele Ndive Iintyala Ngokuzonwabisa Ngeempawu Zomhlaba?
Izihlalo ze-Poker: Zibabiza Njani kwakhona?
Iimfuneko zoKhuseleko lweNxweme yoLondolozo lweenqanawa 16-26 iienyawo